यथावस्थामा हुने चुनावले के निकास देला र खै ! :: जयप्रकाश त्रिपाठी – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
५ आश्विन २०७७, सोमबार १९:०८ English
यथावस्थामा हुने चुनावले के निकास देला र खै ! :: जयप्रकाश त्रिपाठी
असन्तुष्ट पक्षलाई चुनावी प्रक्रियामा सहमत तुल्याउन अपनाइएका फकाउने, धम्क्याउने, फुक्र्याउने र गलाउनेजस्ता सबै उपाय भुत्ते सावित भएपछि अन्तत: उच्चस्तरीय राजनीतिक सयन्त्र नेकपा–माओवादी चुनावमा नआउने ठहरमा पुगेको छ । राजनीतिक र प्राविधिक तवरले समेत अव्यावहारिक ठहरिने हुनाले मात्र यसको औपचारिक घोषणा गर्न प्रमुख राजनीतिक दलहरू हिच्किचाएका हुन् । यसरी अन्तत: वैद्यहरू चुनावमा आउँछन् भन्ने दलीय दाबी हावादारी र प्रमुख भनिएका दलका नेताहरूको ‘तौल’ मापनको माध्यममा खुम्चिन पुगेको छ । तथापि, वैद्य पक्षलाई छोडेर उपेन्द्र यादव, अशोक राईलगायत अन्य साना दलहरूसँग वार्ता गरी तत्काल निचोडमा पुग्ने निर्णय संयन्त्रका तर्फबाट गरिएको छ । यसबाट नेकपा माओवादीसँगको वार्तामार्फत प्रमुख राजनीतिक दलहरू अपेक्षित परिणामको छेउछाउसम्म पनि पुग्न नसकी थाकेको प्रमाणित हुन्छ ।
मोहन वैद्यका मागहरू पूरा गर्नै नसकिने प्रकृतिका र मङ्सिर ४ को निर्वाचन टार्ने उद्देश्यबाटै प्रेरित रहेको तर्क गरिएको छ । यही निष्कर्षका आधारमा उच्चस्तरीय संयन्त्र माओवादीलाई छोडेर असन्तुष्ट अन्य तप्कासँग मात्र वार्ता गर्ने निर्णयमा पुगेको बुझ्न कठिन छैन । तथापि, माओवादीबाहेकका असन्तुष्ट पक्षको सर्त पनि त्यति सरल प्रकृतिका नभई वैद्यपक्षीय मागकै तुल्य–तुल्य नै छन् भन्ने हेक्का स्वघोषित रूपमा राजनीतिक आँधीबाट मुलुकलाई पार लगाउने जिम्मा लिएका दलीय संयन्त्रका नेताहरूलाई छ कि छैन, जिज्ञासाको विषय बनेको छ । कथं, वैद्यले जस्तै रुखो अडान यादव र राईहरूले पनि लिइदिए भने चुनावी सम्भावनाको ग्राफ कति खस्किने हो– नेताहरूले सायदै कुनै सोच बनाएका होलान् । एकातिर चुनाव सुनिश्चितताको निम्ति आफूहरू जुनसुकै लचकता अपनाउन तयार रहेको अभिव्यक्ति उनीहरू दिइरहेका छन्, सँगसँगै यो ढिपी पनि गरिरहेका छन् कि विगतका २५ र ११बुँदे सहमति–सम्झौताहरू यथावतै रहन्छन्, यसमा अब कुनै तलमाथि हुँदैन ! उनीहरूका अनुसार रेग्मी सरकारको निरन्तरता पनि अपरिहार्य छ र मङ्सिर ४ को निर्वाचन तिथि पनि अपरिवर्तनीय छ । यसप्रकारको पूर्वसर्तसहित पछिल्लो चरणमा सरकार तथा राजनीतिक संयन्त्रद्वारा ‘सर्तरहित वार्ता गर्न तयार रहेको’ बयानबाजी सार्वजनिक गरिँदै आएको छ । यसलाई राजनीतिक समस्या समाधानको इमानदार प्रयास नै मानिदिए पनि यो उत्तिकै हास्यास्पद पनि छ ।
उता, नेकपा–माओवादीले यदाकदा वार्ताका लागि निकै लचकता दर्शाएजस्तो गरे पनि मूलत: सरकार र दलीय संयन्त्रसमक्ष तेस्र्याउँदै आएको उसका सर्त वा मागमा रत्तिभर लचकपन आएको अनुभूति गरिएको छैन । माओवादीको यस रवैयाले मोहन वैद्यहरू जुनसकै हालतमा पनि संविधानसभाको निर्वाचन हुन नदिने खेलकै खेलाडी त होइनन् भन्ने सवाल उब्जाएको छ । यसरी जब दुवै पक्ष आ–आफ्ना अडानप्रति सिद्धान्तत: अविचलित छन् भने ‘चुनाव त चाहेकै हो’ भन्दै देखावटीमा लचकताको कुरा गर्नु भयानक ढोंग र जनताको नजरमा धुलो छ्याप्न खोज्नुबाहेक अरू कही हुन सक्दैन । नेताहरूले मुलुक निर्वाचनमा होमिइसकेको दाबी जति नै गरे पनि उनीहरूको त्यो बोलीमा अन्तस्करणको लवज किमार्थ भेटिँदैन । तर, मङ्सिर ४ मै निर्वाचन सम्पन्न गरिछाड्ने दलीय दम्भ झन्–झन् चुलिदाो छ । विषत् आश्चर्यको विषय छ यो ।
यदि नेकपा–माओवादी निर्वाचनमा सहभागी हुँदैन भन्ने निष्कर्षमै दलहरू पुगेका हुन् भने चुनावपछिका दिनमा मोहन वैद्यहरूको स्पेस के हो त ? चुनावपछि उनीहरू त्यत्तिकै बिलाएर जान्छन् कि अन्य दलहरूले देशमा ‘राज’ चलाएको टुलुटुलु हेरी बस्लान् ? कि चुनावअघि तह लगाउन नसकेका प्रचण्डले त्यसपछि चाहिँ गुरु वैद्य एवम् उनका चेलाचपेटा वा सेनामेनालाई जादु गरेर वशमा पार्ने ग्यारेन्टी लिन सक्छन् ? यी सवालका आधारमा त अब भन्नैपर्छ कि या त मङ्सिरमा चुनाव नै हुँदैन र भएछ भने पनि मुलुक र जनताले चाहेको समाधान किमार्थ निस्कन सक्दैन । अर्बौं खर्च लगाएर यस्तो चुनाव गर्नु र नगर्नुको तुक के ? देश अत्यन्त असहज र गम्भीर अवस्थाबाट गुज्रँदा पनि आ–आफ्ना हठ त्यागेर दलहरू एकै ठाउँमा उभिन नसक्नु भनेको भावी नेपाल झन् कमजोर र अशान्त बन्ने कुराको द्योतक नै त हो ।
३० श्रावण २०७०, बुधबार १२:४६ मा प्रकाशित